In ka badan 70% SEO-yada Mareykanka waa rag, waxay sameeyaan wax ka badan saaxiibbada dumarka | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/In ka badan 70% SEO-yada Mareykanka waa rag, waxay sameeyaan wax ka badan dumarka saaxiibada ah
In ka badan 70% SEO-yada Mareykanka waa rag, waxay sameeyaan wax ka badan dumarka saaxiibada ah
Weli waxaa SEO ka jira sinnaan la'aan weyn oo jinsiga ah. Sannadkii 2015, SEO-yada dumarku waxay matalayeen 30% warshadaha, sida lagu sheegay sahan ka yimid Moz. Boqolkiiba in aanay hoos u dhicin shan sano gudahood, marka loo eego sahan cusub oo caalami ah oo 652 SEO ah oo ka yimid Nicole DeLeon's North Star Inbound.
Raggu waxay matalayeen 68.4% jawaab bixiyaasha sahanka, halka dumarkuna ay ahaayeen 29.3%. Boqolkiiba in yar ayaa diiday inay sheegto ama loo aqoonsado mid aan binary ahayn.
US waxyar ayaa ka xun celceliska. Juqraafi ahaan la jebiyey, tirooyinka Maraykanku waxa ay ahaayeen qaar ka qalloocan muunadda guud. SEO-yada ragga ah waxay ka koobnaayeen 70% jawaab bixiyaasha. Si kastaba ha ahaatee waxaa jiray xitaa saamiga lab iyo dheddig ee Asia, UK, Australia iyo Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika.
Hal shay oo ay tahay in maskaxda lagu hayo: muunadda 652 jawaab-bixiyeyaashu waxay la macno tahay marka loo qaybiyo juqraafiga, tirooyinka ayaa laga yaabaa inay aad u yaraadaan si ay u noqdaan wakiil. Laakin, xogtu waxay la socotaa sahanadii hore ee kale.
Juqraafiga iyo SEO kala duwanaanta jinsiga
Xigasho: North Star Inbound.
Farqiga mushaharka ayaa hadhay. Sahan dhowaan la sameeyay oo BrightLocal ah oo ku saabsan dadka ka shaqeeya SEO-ga maxalliga ah ayaa si gaar ah u helay farqiga mushaharka ee qiyaastii 14% u dhexeeya ragga iyo dumarka. Ragga ayaa sidoo kale aad ugu dhow inay qabtaan xilal sare oo wakaaladaha ah.
Sahanka North Star Inbound wuxuu ogaaday in guud ahaan guddiga haweenka ay sameeyaan oo ay lacag ka qaataan wax ka yar kuwa dhiggooda ah, ha ahaadeen hay'ado ama madax-bannaani ahaan. SEO-yada adeegsada wax-hayayaasha, "kuwa lagu aqoonsado inay rag yihiin waxay ku dallacaan kaydiye dhexdhexaad ah $2,250 bishii halka kuwa dumar u aqoonsanaya ay ka qaadaan dhexdhexaadiye $1,750."
Kuwa biilasha ku salaysan mashruuc, raggu waxay dallaceen ku dhawaad ​​67% dheeraad ah. Labka xorta ah ayaa soo sheegay "dhexdhexaad ah $5,000 vs. $3,000 ee haweenka-aqoonsiga SEO-yada." Farqiga ayaa xitaa ka weynaaday hay'adaha ku dalacaaya mashruuca: $8,750 mashruucii ragga, $2,250 dumarka.
Gudaha-guriga, farsamada SEO iyo kuwa xorta ah. Natiijooyinka laga helay SEO-yada-guriga ee sahanka North Star Inbound waxay ahaayeen xoogaa dhiirigelin ah. Dumarka iyo ragga ayaa si isku mid ah "waxay soo sheegeen heerar xooggan oo iskaashi waaxeed iyo taageerada mudnaanta SEO." Dumarkuna waxa ay u muuqdaan in ay ka yara qanacsan yihiin ragga marka loo eego taageerada guriga, shaqaaleysiinta, miisaaniyada iyo qalabka.
Laakiin farsamada SEO, waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya ragga iyo dumarka. Ku dhawaad ​​22% jawaab bixiyaasha ragga ah ayaa isu aqoonsaday inay yihiin khabiiro SEO ah marka la barbar dhigo wax ka yar 13% haweenka.
Ugu dambeyntii, haweenku waxay uga badnaayeen ragga inay noqdaan kuwa iskood u shaqeysta ee SEO: 17.7% dumarka vs. 10.6% ragga. Sahanku wuxuu qiyaasayaa in tani ay sabab u tahay baahida weyn ee loo qabo jadwal dabacsan oo haweenka dhexdooda ah. "Qeyb ka mid ah rafcaanku waxay noqon kartaa dabacsanaan ku saabsan daryeelka ilmaha, laakiin xakamaynta dakhliga ayaa sidoo kale ahaa arrin loogu talagalay qaar ka mid ah SEO-yada aan wareysannay," North Star Inbound ayaa sharraxay.
Sababta aan u danayno. Ururada muujiya kala duwanaansho wayn oo kooxahooda hogaamineed waxay u badan tahay inay noqdaan kuwo cusub oo leh kobaca dakhliga. Runtii, kala duwanaanshuhu wuxuu u fiican yahay khadka hoose. Laakin, ka gudubka eexda hay'adaha iyo takoorka lab iyo dheddig waa mushkilad salka ku haysa iyo xataa dhismo taas oo qaadan doonta dadaal wadajir ah muddo sanado ah si looga gudbo.
Inkasta oo ay jiraan meelo ay ku rajo weyn yihiin xogta sahanka - iyo in kasta oo qaar aad u guulaysteen, haweenka SEO-yada sare ee warshadaha - waxaa jiray horumar kooban oo kaliya shantii sano ee la soo dhaafay. Sida cad, waxaan u baahanahay inaan wax badan ka qabano habka tababarka, hagidda iyo isbeddelka dhaqameed.
13 sheeko oo haween ah oo qaabeynaya goobta SEO
Siyaabaha la fulin karo ee lagu wado kala duwanaanta, sinnaanta iyo ka mid noqoshada ururkaaga suuqgeyneed
Ku-noqoshada: Wax ka qabashada kala duwanaanshaha, qorista iyo ku-haynta hay'adaha iyo kooxaha suuq-gaynta
Sidee bay uga go'an tahay kala duwanaanshaha ururku u eg yahay?
Ku Dhisida Isticmaalaha-Ugu Horeeya ee Bogagga AMP Plugin ee la cusboonaysiiyay ee WordPress
WordPress oEmbed: Ku dheji (Ku dhawaad) Wax walba